गृहमन्त्रीको दवाबमा नारायणगढ मुग्लिन सडक पुरै कालोपत्रे, अब चौबिसै घण्टा खुल्ने ! – Todays Nepal
गृहमन्त्रीको दवाबमा नारायणगढ मुग्लिन सडक पुरै कालोपत्रे, अब चौबिसै घण्टा खुल्ने !
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको सम्पूर्ण खण्ड कालोपत्रेबाट जोडिएको छ। यो सँगै अब यो सडक खण्ड चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले केही दिनमै अहिले भइरहेको दैनिक बन्द हटाएर यो सडक खण्ड चौबिसै घण्टा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। हाल यो सडक खण्ड निर्माणका लागि दैनिक ४ देखि ६ घण्टा बन्द हुने गरेको छ।
निर्धारित समयभन्दा झण्डै १४ महिना ढिलो सम्पन्न हुन लागेको मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड निर्माणका लागि २०७२ सालको भूकम्पको मुखैमा सम्झौता भए पनि त्यसलगत्तै भएको भारतीय नाकाबन्दीमा ईन्धन अभावको मारका कारण ढिला भएको खनालले बताए।
‘दैनिक ४ देखी ६ घण्टासम्म घामपानी, भोक,तिर्खा,थकान नभनी धैर्यता प्रकट गरिदिनुहुने यात्रु तथा चालकलाई हृदयदेखि नै धन्यबाट सहित माफी पनि माग्न चाहन्छु’, खनालले भने, ‘अब एकदुई दिनमै यो दैनिक बन्दलाई पनि खुल्ला गर्ने छौँ।’
आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिँदै उनले अब कम्तीमा यात्रुले सहज तरिकाले यात्रा गर्न पाउने सुनिश्चितता भएको बताए। ‘बाँकी रहेका ठाँउमा दोस्रो/तेस्रो तहको कालोपत्रे गर्ने काम म्याद थप भएमा सोही समयभित्र र म्याद थप नभएमा जरिवाना तिराएर भएपनि सहजै सम्पन्न गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
आँपटारी-दासढुंगा खण्ड को १०.४५ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा दोस्रो तहसम्मको कालोपत्रे भइसकेको छ। यहाँ दासढुंगा पुल भने निर्माण हुन बाँकी छ। तेस्रो तहको कालोपत्रे पनि दुई किलोमिटर सकिएको छ। यो खण्डको भौतिक प्रगति ९१.२० प्रतिशत रहेको खनालले बताए। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो खण्ड काम गर्न अन्यको तुलनामा सहज रहेको उनको भनाई छ।
दासढुङ्गा-सिमलताल खण्डको १०.६९ मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा तिनै तहको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। यो खण्डको भौतिक प्रगति ९७.५० प्रतिशत छ। सिमलताल-मुग्लिन खण्डको १२.१५ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्ण लम्बाईमा पहिलो तहको कालोपत्रे सकिएको छ। ११.८० किलोमिटरमा दोस्रो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यो खण्डमा तेस्रो तहको कालोपत्रे सुरु भएको छैन। अन्य दुई खण्डको तुलनामा यो खण्ड पहिरोको दृष्टिकोणले बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ।
समग्र आयोजनाको ३३.२ किलोमिटर मध्ये सम्पूर्णमा पहिलो तहको कालोपत्रे सकिएको, ३२.७० किलोमिटरमा दोस्रो तहको कालोपत्रे सकिएको र १२.७ किलोमिटरमा तेस्रो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको उनले बताए। सम्पूर्ण सडकखण्डमा भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत छ।
६ सेन्टिमिटर मोटो पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पूर्ण खण्डमा सम्पन्न भइसकेकोले अब नारायणघाट-मुग्लिन सडक अवरोध नभएको अवस्थामा ३५ मिनेटमै पार गर्न सकिने आयोजनाको दावी छ।
किन पिटे सलमानले रणवीरलाई ?
प्रधानमन्त्री अोलीले पार्टीमा भित्र्याएका ‘कामचोर’ ठेकेदार प्रकाउ !